PVC WPC Door Board Extrusion Line - China PVC WPC Door Board Extrusion Line Mutengesi, Factory -Jwell
Iyo extruder yeiyi extrusion mutsara ndiyo yakasarudzika yakagadzirirwa SJZ92 conical twin-screw extruder, iyo inotora iyo yekunze tembiricha yekudzora gauges ine maficha eakanyanya chaiyo tembiricha kutonga uye nyore uye kuvimbika mashandiro. Tafura yekuvharidzira calibration yakagadzirirwa ine yakasimba kutonhora chishandiso iyo inovimbisa iyo inotonhorera mhedzisiro. Iyo yekukwevera yuniti yakagadzirirwa neicho chaiyo yekudzikisa mota uye inverter, iine zvakanakira zvine musoro mamiriro, ane simba uye akatsiga dhonza simba. Iyo yekucheka ine yakavimbika uye yakarurama yekucheka mhedzisiro. Iyo stacker ine inokwenenzverwa stacking trolley uye yakakosha yakaita yerabha yekudzivirira dura kudzivirira chigadzirwa kubva mukukweshwa. Iwo ekudzika michina yeiyi extrusion tambo inoshandisa iyo programmable komputa kana yepamusha inozivikanwa kudzora system, kusimbisa muchina wakavimbika uye wakatsiga.